Raha manana Apple Watch Series 2 ianao dia mijanona tsy mijery WatchOS 8 | Vaovao IPhone
Resy lahatra izahay fa mazava ny ankamaroanareo iza amin'ireo fitaovana no tavela amin'ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa watchOS 8. Saingy misy ihany koa ireo mpampiasa vaovao izay tonga eo amin'ny tontolon'ny Apple noho ity fitaovana ity na mieritreritra ny hividy iray, izany no mahatonga ity lahatsoratra ity hifantoka aminy.
Ny Apple Watch Series 2 dia miasa tsara amin'izao fotoana izao ary na dia manana rafitra fiasan'ny watchOS 6.2 taloha aza izy ireo Tsy manana olana amin'ny fandidiana izy ireo. Rehefa manapa-kevitra ny hamoaka ny kinova 8 an'ny OS i Apple dia hiala amin'ny fanavaozana izy ireo.
Ny Apple Watch Series 2 dia manomboka amin'ny septambra 2016
Ny maodely rehetra dia hifanaraka amin'ilay kinova vaovao ary noho izany Apple manapaka an'ity kinova ity mivantana amin'ny famantaranandro natolotry ny volana septambra 2016, tsy isalasalana fa fotoana bebe kokoa noho ny mety ho an'ny mpampiasa manova ny maodely na mankafy fotsiny ny tombotsoany nefa tsy mitaky mihoatra lavitra noho izay efa manolotra. Ary izany ve ny tsy fanekena ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa dia tsy midika hoe mijanona tsy miasa ilay fitaovana, ity dia zavatra mbola tsy takatry ny mpampiasa maro.
Etsy ankilany, raha mikasa ny hiditra amin'ny tontolon'ny Apple Watch ianao ary hividy iray, mazava ho azy izahay dia manoro hevitra ny kinova farany misy amin'ilay famantaranandro na amin'ny tranga hafa raha toa ka tsy te handany be amin'ny kinova Series 6 ianao , tsara kokoa ny mitsambikina amin'ny kinovan'ny SE izay tena lafo vidy. Azonao atao ihany koa ny manantena ny hianjera satria mety hamoaka ny Series 7 vaovao azy i AppleNa dia tsy dia be loatra aza ny tsaho momba izany amin'izao fotoana izao dia saika vonona ny handefa ilay maodely fiambenana vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Raha manana Apple Watch Series 2 ianao dia miala amin'ny watchOS 8
Tsy mahazo fampandrenesana WhatsApp avy amin'ny chat arisiva aho